Guddoomiyaha Golaha Wakiiladda Oo Meel Adag Iska Taagay Dalabka Khaatumo Ee In Dastuurka Somaliland La Furro – HormoodNews
Guddoomiyaha Golaha Wakiiladda Oo Meel Adag Iska Taagay Dalabka Khaatumo Ee In Dastuurka Somaliland La Furro
08/11/2017 11:01 pm by HormoodNews Views: 6
Laascaanood (HMN): Guddoomiyaha golaha Wakiiladda jamhuuriyadda Somaliland Baashe Maxamed Faarax, ayaa sheegay in aanay wax suurtogelaya ahayn soo jeedinta maamulka Khaatumo ee ah in la furro dastuurka Somaliland si la isugu miisaamo saami-qaybsiga kuraasta sare ee dawladda.
Sida uu dhigayay qodob ka mid ahaa heshiiskii ay bishii 6-aad ee sanadkan magaaladda Hargaysa ku gaadheen gudiyadda wada hadaladda u qaabilsan Somaliland iyo maamulka Khaatumo, hase yeeshee guddoomiyaha golaha Wakiiladda ayaa cadeeyay in arrintaasi laga fiirsanayo.
Baashe Maxamed Faarax, oo maanta khudbad u jeediyay dadweynaha tuuladda Kala-baydh ee gobolka Sool, halkaasi oo lagu soo dhaweeyay wefti uu hogaaminayo guddoomiyaha xisbiga Kulmiye oo socdaal ku maraya gobolkaasi.
Waxaanu shacabka reer Laascaanood ugu bushaareeyay in laga fiirsanayo arrintaasi, kadib markii ay masuuliyiin ahaan dib isugu noqdeen in ay u soo baxday in beesha gobolka Sool ay saami laxaad leh ku leedahay xukuumadda hadda. “Wada hadallo ayaa u socda dawladda Somaliland iyo maamulka Khaatumo. Khaatumo waxay codsadeen in dastuurka jamhuuriyadda Somaliland la furro.
Guddoomiyaha Wakiiladda ayaa ku tilmaamay sababta uu madaxweyne Siilaanyo wada hadaladda ula furay maamulka Khaatumo in ay tahay isagoo ay ka go’an tahay in uu xukunka ka tago iyadoo ay gebi ahaanba bulshadda goboladda Somaliland midaysan yihiin.
Waxaanu yidhi “Madaxweyne Axmed Siilaanyo wuxuu rabaa in uu ka tago Somaliland oo mid ah, oo walaallo ah, oo aanay wax u dhexeeyaa jirin. Waxaynu ka wada shaqaynaynaa in aynu oofinno Cah-digaa uu madaxweynuhu galay, ee ah in dadkan la walaaleeyo”.
Dhinaca kale guddoomiye Baashe, ayaa kula dar-daarmay bulshadda gobolka Sool in ay codkoodda siiyaan musharaxa xisbiga Kulmiye Muuse Biixi Cabdi, marka la gaadho doorashadda madaxtooyadda.
Isagoo faahfaahin ka bixinayay tiradda markii hore iska diiwaangelisay degaamadda gobolka Sool, waxa uu yidhi “Laascaanood waxaa markii hore iska diiwaangeliyay dad tiradoodu tahay 8700 oo qof. Degaanka Xidh-xidh waxaa iska diiwaangeliyay 3400 oo qof, Kala-baydh waxaa iska diiwaangeliyay 4100, Karin iyo Qoriile-na waxaa iska diiwaangeliyay 3000 oo qof, meello kale oo badana way jiraan.
Waxaanu intaa ku daray “Hiilka kale ee aan idiinka baahanahay waxa weeyi, waxaa nala socda musharaxii jagadda madaxweyne ee xisbiga Kulmiye, oo aan rejaynayo in uu saddex bilood dabeed fadhiisan doonno kursiga madaxweynaha.
Waxaan magan idiinka ahay in aad ii balan qaadaan xisbiga Kulmiye in aad codka siinaysaan, sidii aad hore-ba u siiseen”ayuu yidhi Baashe.